चित्रकला plasticine: उपकरण
"समतल" चित्रहरु र मूर्तिहरु, संसारको अर्थात् तीन-आयामी छवि - यस्तो माटो रूपमा सामाग्री चित्रकला, यो दुई ठीक विधाहरू चौराहे मा स्थित कला छ। माटो निर्माताहरू र कलाकारहरूको लागि एक उत्कृष्ट सामाग्री छलफल गर्न सकिन्छ, तर यो बुझ्न सक्षम भएको छैन जस्तो देखिन्छ।
कलाकार सामाग्री को रहस्य मालिक र undoubted merits मा यसको कमजोरी गर्न सक्नुहुन्छ भने, उनले एक घर शिल्प र कला को काम, सबै भन्दा सूक्ष्म, लगभग अविवेच्य देखि जटिल convex reliefs गर्न तेल चित्रकला चित्रहरु देखि माटो सिर्जना गर्न सिक्न हुनेछ।
यस्तो माटो रूपमा सामाग्री को लाभ के हुन्?
माटो को पहिलो फाइदा यसलाई सजिलै बिल्कुल कुनै पनि आकार, effortlessly र रोल्ड स्वीकार छ। साथै, यो कलाकार को अनुरोध मा कुनै पनि तह को सतह मा तल कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग पार्छ। अर्को शब्दमा, माटो painting धेरै सुविधाजनक छ: निर्माता अत्यन्तै pliable सामाग्री संग काम गरिरहेको छ। तर, ductility बस plasticine को धेरै रहस्य छ।
यो सामाग्री को दोस्रो फाइदा यो यस्तो चिपचिपाहट वा "stickiness" रूपमा गुणस्तर छ भन्ने छ।
तेस्रो फाइदा माटो धनी रंग र उज्ज्वल रंग छ। यो plasticine रेखाचित्र सबैभन्दा रोचक तरिकामा एक बनाउन, कलाकार अवसर दिन्छ। तर, यो छैन अन्तिम गोप्य छ।
यो सामाग्री को चौथो फाइदा भएको प्यालेट गर्न माटो साथै कलात्मक रंग रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने हो। plasticine चित्रकला प्रविधी नयाँ सिर्जना गर्न विभिन्न रङ को मिश्रण समावेश छ। साथै, तपाईंले बीच मा रंग को पूर्ण सीमा प्राप्त गर्न सक्छन्।
Thermolability माटो ठूलो को चौथो फाइदा छ। यो पनि आफ्नो Palms एक तापमान मा, गरम गर्दा नरम गर्न सजिलो छ। यो कलाकार हातमा plasticine चित्रकला जस्ता व्यवसायहरुको लागि मुख्य उपकरण बनाउँछ। काम भन्दा केही निर्माता, बाहिर भविष्यमा तस्वीर को सतह मार्फत आफ्नो औंलाहरु संग सामाग्री प्रसार।
बाल सदन मा Plasticine रेखाचित्र विकास गर्न मद्दत गर्नेछ को ठीक मोटर कौशल बच्चाहरु हात। यो, पक्कै पनि वर्णन सामाग्री अर्को फाइदा छ। साथै, एक किंडरगार्टन मा plasticine चित्रकला र स्कूल छोराछोरीको रचनात्मक कल्पना को विकास बढवा दिन्छ।
अर्को हामी यो सामाग्री चित्रकला प्रविधी को रहस्य कुरा हुनेछ।
कि के आवश्यक छ?
को वस्तुहरू सबैभन्दा expressive तस्बिरहरू लागि तस्वीर plasticine आवश्यक हुनेछ कलाकार, पहिलो, उपकरण, र, दोश्रो, आफ्नो कल्पना।
पहिलो एक गुणवत्ता र रंगीन plasticine आवश्यक छ। हात गर्न साना छडी, राम्रो। यसबाहेक, यो राम्रो kneaded र सँगै मिश्रित गर्नुपर्छ।
भविष्यमा तस्वीर को आधार Plexiglas, hardboard, प्लाईवुड, बाक्लो गत्ता वा ग्लास रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यो बोर्ड भने, त्यसपछि यो सामाग्री तेल दाग देखाउन हुँदैन। कलाकार इच्छित बनावट सिर्जना गर्न सक्षम थियो लागि साथै, बाहिर सामाग्री, चिमटी, र हात मा विभिन्न उपकरणहरू रोल गर्न हात पोंछे, बोर्ड सजावट लागि आवश्यकता, पानी एक गिलास, एक AWL, एक रोलिंग पिन। उदाहरणका लागि, तपाईं लसुन लागि धातु strainer, कोर्नु, masher प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। घाँसका पातहरू र सिर्जना गर्न stems एक सुई बिना एक चिकित्सा सिरिंज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बाक्लो "ससेज" को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ मिष्ठान्न सिरिंज लागि।
सजाउनु गर्न तस्वीर प्राकृतिक सामाग्री, आभूषण, प्लास्टिक भागहरु र यति मा को एक किसिम प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, शंकु, twigs वा सुक्खा पात लागि।
पेन्सिल, गत्ता मा स्केच जो मा तपाईं plasticine चित्रकला पूरा गर्नेछ आवश्यक छ। टेम्प्लेट पनि निषेध गरिएको छैन।
ग्लास अन्तर्गत फ्रेम जारी गर्न Plasticine चित्रहरु मनमोहक। तस्वीर समतल छ भने, यो पारदर्शी फिलिम अन्तर्गत भण्डारण गर्न सकिन्छ।
चित्रकला plasticine: मास्टर क्लास
संरचना शुरू कागज को टुक्रा मा एक स्केच रेखाङ्कन गरी गर्भवती गर्नुपर्छ। यो चरण मा यो अग्रभूमि र पृष्ठभूमिमा विवरण लागि रंग चयन गर्न आवश्यक छ। रंग र यसको विपरीत को संयोजन बारे मा भूल छैन। पहेलो - उदाहरणका लागि, पहेलो वस्तु हरियो पृष्ठभूमि र नीलो मा उज्जवल प्रकट हुनेछ। कि पृष्ठभूमिमा यो अवलोकनकर्ताले को ध्यान विचलित रूपमा पनि उज्ज्वल हुँदैन सम्झना।
अर्को, तपाईँले भविष्यमा तस्वीर को इच्छित ढाँचा चयन र आधारमा सेवा गर्नेछन् भन्ने सामाग्री देखि एक आयताकार प्लेट बाहिर कटौती गर्न आवश्यक छ। स्थानान्तरण एक स्केच संग छवि मा आधारित। तपाईं crayons र छोराछोरीको ग्रिड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं ग्लास प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं बस कपडा अन्तर्गत स्केच राख्न र टेप संग सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
अब प्रिपेरेटरी काम, पूरा गर्दै छवि बनाउन तयार हुनुपर्छ।
माटो संग काम
"शुद्ध" सधैं रंग यस सामग्रीको लागि उपयुक्त। अक्सर, को योजना रंग योजना को बोध लागि काम गर्दा रंग र माटो को किसिमहरु को मिश्रण रूपमा प्रयोग गरिन्छ। इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न अनुपात चयन गर्नुपर्छ।
मुख्य रंग बारे मा भूल छैन। यो रातो नीलो र पहेंलो छ। जब केही अनुपात मा मिश्रित संजात टोन प्राप्त। तपाईं संग नीलो पहेंलो मिश्रण भने, तपाईंले एक प्राप्त , हरियो रातो बैजनी, रातो र पहेंलो - - सुन्तला र नीलो।
तपाईं सेतो माटो को परिणामस्वरूप छाया थप्न भने, यो चमक गुमाउनु हुनेछ र प्यास्टेल हुनेछ।
के तपाईं "फोहोर" रंग प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं एकै समयमा दुई भन्दा बढी रंग मिश्रण हुँदैन।
तपाईं फ्लोरोसेन्ट र मत्ती माटो मिश्रण भने, त्यसपछि तपाईँले नयाँ गुणवत्ता सामाग्री छ छौँ।
सतह प्राप्त चमकदार प्रभाव गर्न, औंलाहरु पानी moistened हुनुपर्छ।
मोडेलिंग को विधिहरू
त्यहाँ मोडेलिंग पाँच आधारभूत प्रविधी हो। यो रोलिंग, रोलिङ, खींच, महीन, सपाट र Topping। साथै, इच्छित Textured प्रभाव हासिल गर्न, यो आवश्यक थप उपकरण बाकस प्रयोग छ।
लाग्यो को चिकन: आफ्नै हात, वर्णन, रोचक विचार संग ढाँचा
नवजात शिशुहरु लागि मेट्रिक: कढाई योजना। नवजात शिशुहरु लागि कढाई मापन कसरी?
आफ्नै प्रकार कसरी बनाउने?
शरद ऋतु को विषय मा प्राकृतिक सामाग्री बनेको लेख। एक आकर्षक र शैक्षिक पाठ
नयाँ मोब्स "Maynkraft" - फैशन मार्फत थप
Sarcoidosis - यो के हो?
उपयोगी जानकारी: कागज बनेको एक ड्रागन कसरी बनाउने
टाउको मा बढ्दै प्याज: तरिका
कालो ब - रहस्यमय प्राणी